Fihaonan’ireo Malagasy teto Egypta tamin’i filohan’ny CAF AHMAD AHMAD – Gasy Egypte
“Nisy ny fihaonana teo amin’ny Malagasy monina eto Egypta sy ny filohan’ny CAF na ny Vondrona iraisan’ny firenena Afrikanina ho an’ny Baolina kitra ny faran’ny herinandro lasa teo.” (Confédération Africaine de Football, somary sarotra ihany ilay dikan-teny)
Nivaly ny hetaheta sy ny fangatahan’ireo Malagasy teto Egypta raha naniry hihaona amin’ny filohan’ny CAF AHMAD AHMAD na dia efa heritaona taty aorian’ny nahalany azy ho eo amin’izany toerany izany. Ny antony faniriana moa dia tsotra sy mazava fa nohon’ny fototra iraisana amin’ny maha samy Malagasy sy mpiray tanindrazana. Koa ny zoma 20 aprily 2018 dia niantso sy nanasa ireo Malagasy rehetra monina eto Egypta ny CAF. Notontosaina tao amin’ny hotely lehibe iray teto an-toerana moa ilay fihaonana: Mariott Hotel. Tamin’io fotoana io indrindra no niarahaban’ny rehetra azy ary nirary soa ka hahavita be amin’ny adidy sy ny andraikitra sahaniny. Teo ihany koa ny fiarabana azy tongasoa eto Egypta tamin’ny alalan’ny mpitondra tenin’ny Malagasy rehetra izay tsy iza fa ny filoha mpitarika ny fikambanana: Zoky RAJAB A.
Ny Ekipan`ny GasyEgypte.Com miaraka amin`ny Filohan`ny CAF AHMAD AHMAD
Nanasa ihany koa ny fikambanan’ireo mpianatra avy amin’ny nosy “Comores” izy ireo tamin’io fotoana io mba ho fihaonan’ny filohan’ny CAF amin’ireo firenena afrikanina mizara ny ranomasim-be Indiana.
Reharehan’ny Malagasy sy ny firenentsika ny toerana misy ny filoha Ahmad izay sady filoha lefitry ny FIFA, nahatsiaro izany tokoa ny rehetra ka tonga maro be nandritra ny fotoana. Nanome voninahitra ny fotoana ka nanotrona izany ihany koa ireo mpiara-miasa akaiky amin’i filoha: Mr Moustapha (Directeur de Compliance), Mr Ludovic (Conseiller Juridique), Mr Hedi (Conseiller en communication) ary Mr LoÏc (Attaché du président).Tao anatin’ny lahateny nataony moa dia nanamafy hatrany izy ny amin’ny fahavononana hiaino sy hiara-hiasa amin’ireo Malagasy rehetra eto Egypta mandritra ny fotoana hijanonany eto. Nanentana ny rehetra tsy hisalasala ary hiresaka aminy malalaka; ary raha toa moa ka tsy eto an-toerana izy dia ampitaina amin’ireo mpiara-miasa aminy izany. Noporofoiny avy hatrany ny fahavononany hanampy ny mpiray tanindrazana satria dia nisy ny fanolorana vola ho fanampiana ny fikambanana izay mizaka tena tanteraka indrindra moa fa ireo mpitarika dia manao ny adidy sy ny asa rehetra an-tsitrapo.
Tao aorian’ny lahateny samy hafa dia notohizana tamin’ny fametrahana fanontaniana sy resaka nifanaovana tamin’i filoha (une discussion ouverte), nitohy tamin’ny hira iray izay manamarika ny firahalahina sy ny firaisan-kina misy eo amin’ny samy Malagasy. Nofaranana tamin’ny fiaraha-misakafo moa ny fotoana.
Nahafinaritra ny fotoana ary voalohany sady sarobidy teo amin’ny tantaran’ny fikambanana sy ny Malagasy teto Egypta no nisy fanasana lehibe toy ireny. Mankasitraka indrindra ary misaotra ny CAF nosoloin’ny filoha Ahmad tena izahay Malagasy eto Egypta.
11 Thoughts to “Fihaonan’ireo Malagasy teto Egypta tamin’i filohan’ny CAF AHMAD AHMAD”
Viagra Y Cialis Contrareembolso Healthymen Online Pharmacies In India viagra Overnight Pharmacy4u Order Veterinary Dosage Of Cephalexin Acheter Cialis Viagra Generique Cytotec Pour Fausse Couche Viagra Wie Teuer viagra prescription How To Buy Provera Medication No Prescription Needed Secure Doxycycline Best Buy Fedex Cephalexin And Angioedema In Dogs
Super Active Viagra Online viagra prescription Rosulip Cialis Apotheke Eu Cephalexin 250 Proper Dose Of Amoxicillin For Dogs generic cialis from india Free Shipping Direct Levaquin Worldwide Zentel Discount With Next Day Delivery online cialis Cialis 5mg Medicament Buy Letrozole Gynecomastia Cialis 20mg Kosten brand levitra 20 mg online india Finasteride 5 Mg Generic Tablets Propecia Disefoto
Ursodiol viagra online prescription All Pill Shop Levitra Trial
Change From Clindamycin To Amoxicillin online pharmacy Priligy Torrinomedica Tadalafil Et De Dapoxetine
Cialis Levitra Farmacias Zithromax Alcohol Consumption cialis without prescription Amoxicillin Treat Meningitis
Acheter Viagra A Marseille cialis levitra viagra l impuissance Amoxicillin And Green Tea Discount Generic Provera With Free Shipping Real Propecia Cheapest
Finasteride Claravis Carmarthenshire viagra online prescription Lyme Disease Amoxicillin Viagra Belgique Prescription
Propecia Forum 2012 Propecia Hair Loss Causes Cephalexin And Indications And Uses cialis 20mg price at walmart Mrsa Keflex Propecia Fiabilidad Lisinopril From India Pharmacy
Cephalexin 750mg Online Herbal Club Cialis Generico Simi generic cialis overnight delivery Viagra Online
Buy Avanafil Online Viagra Bestellen Gunstig cialis 20mg price at walmart Alternative Med To Amoxil Online Generic Cialis Tadalafil
Dutasteride Australia Mastercard Accepted With Overnight Delivery Pharmacy Canada Alli Diet Pills cialis canada Achat Medicament Generique Cialis Pvp Cialis Diario